Tselatra · Febroary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Febroary, 2008
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Febroary, 2008
Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Andriamifidisoa Zo
17 Febroary 2008
Ronald Flores no mijery todika ny boky vaovao nosoratan’i María del Carmen Aceña mitondra ny lohateny hoe “Ahoana rehefa Minisitry ny fampianarana eto Goatemala, mampihatra ny fanavaozana ary tsy rendrika am-panatanterahana: Boky fampiasan-tena.” Manoro hevitra ny mpamaky i Flores hividy ity boky “tena ilaina” ahitana ny haizatran’i Aceña tao amin'ny governemanta Goatemalteka ity.
01 Febroary 2008
Na dia tsy misy aza, ry zareo, ny atody eny an-tsena dia nosoratan'i Bu Jassem avy ao Emirà Arabo Mitambatra fa misy fifaninanana te-hanintsana ny zavabita tsara indrindra amin'ny voasoratra ao amin'ny Guinness. Ilay fifaninanana atao dia fitondrana atody maro isa indrindra amin'ny tanana iray ihany ka tontosaina ao Dubai izy io. (dia tena tian'ny Emirà Arabo Mitambatra mihitsy ity atody ity an!, hoy ny mpandika teny)